TOP NEWS: Gaari AMISOM oo Bajaajle ku jiiray Muqdisho oo ‘dad shacab ah’ qabtay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta TOP NEWS: Gaari AMISOM oo Bajaajle ku jiiray Muqdisho oo ‘dad shacab...
TOP NEWS: Gaari AMISOM oo Bajaajle ku jiiray Muqdisho oo ‘dad shacab ah’ qabtay
Muqdisho (Halqaran.com) – Mid ka mid ah gaadiidka qafulan ee Ciidamada AMISOM ay wataan ayaa Isniintii maanta wade Mooto Bajaaj wuxuu ku jiiray Isgoyska Zoobe, kadibna wuxuu isku dayay inuu ka dhaqaaqo.
Markii falkaasi uu dhacaayay ayaa waxaa arkaayay dadweyne kala duwan oo halkaasi joogay, balse waxa ay filayeen ayaa ah in gaariga AMISOM uu istaagi doono.
Gaarigii AMISOM ee falkaasi gaystay ayaa isku dayay inuu baxsado, balse shacabkii joogay Isgoyska Zoobe ayaa mar kaliya qaatay dhagxaan iyo biro waxaana ay isku gadaameen gaarigii Amisomta oo ay gacanta ku dhigeen.
Intaasi kadib dadkii shacabka ahaay ayaa waxa ay waceen Ciidanka illaalada wadooyinka ee Taraafikada loo yaqaan, si kiiska dhacay loo cabiro kadibna Ciidamada AMISOM sharciga loogu qaado.
Goobjooge ayaa mareegta Halqarn.com u sheegay dadka shacabka oo careysan falka ay ku kaceen Ciidamada AMISOM inay qabteen gaarigii oo rabay inuu baxsado.
“Darawalka gaariga AMISOM waday inuu iska sii socdo ayuu rabay laakiin dadka shacabka ah ayaa qayliyay oo ku dhagay dhagxaan iyo Biro ayeey soo qaateen shacabka sidaas ayeeyna ku celiyeen.” Ayuu yiri Goobjoogahaasi.
Si kastaba, ciidamada AMISOM ayaa dhawr mar gaadiidkooda tacadiyo kala duwan oo ay ka gaysteen magaalada Muqdisho isaga dhaqaaqay, xilli aysan jirin cid kala xisaabtamaysa masuuliyada falalka ay gaystaan Ciidankaasi.
dad shacab qabtay
jiiray wade Bajaajle